Ukuhamba ngeTCDD kuya kwenza ukuba abasebenzi bafumane isigxina! | RayHaber
ikhayaETURKEYUmmandla waseMntla Anatolia06 AnkaraUkuhamba ngeTCDD kuya kwenza ukuba abasebenzi bafumane isigxina!
28 / 11 / 2019 06 Ankara, Ummandla waseMntla Anatolia, Imisebenzi, JIKELELE, AMAZIKO, ZOMHLATHI, ETURKEY, TCDD Transportation Inc.
I-ace zabasebenzi bakarhulumente
I-TCDD Tasimacilik AS iya kuqesha amaGosa e52! Ukulinganisa, ukuKhetha kunye neZiko lokuBekwa kwi-S 52 / 2019 KPSS isikhokelo sokhetho olukhethiweyo lwe-tarafından yi-OSYM yapapasha amaziko oluntu kunye nemibutho yesikolo esiphakamileyo, izidanga zabasaqalayo nabadibene nabo kwizidanga zemfundo zabhengezwa kubo bonke abasebenzi.
I-KPSS 2019 / 2 yokuqesha korhulumente kwi-State Railways Transportation Inc. kwabo bakhetha ukuhanjiswa kweekota kunye neemeko zesicelo zezi zilandelayo:
IXESHA DEMİRYOLLARI TAACIMACILIK A.Ş.
Ukugaywa kwamagosa aphumelele izidanga; Icandelo Lolawulo Lwezothutho lweLizwe. ”I-TCDD Taşımacılık A.Ş. Abaphumelele kwi-52 baya kuqeshwa kwakhona. I-TCDD yezoThutho Co Izabelo zokufunwa kwabasebenzi bakarhulumente zezi zinto zilandelayo: ukuqeshwa kwabaguquli be3, ukuqeshwa kwamagqwetha e-1 kunye nokuqeshwa kwabasebenzi bakarhulumente base48, abasebenzi abangama-52 abasisigxina baya kuqeshwa.
Kwikhetho lwe-KPSS 2019 / 2 kwi-General Direct of Railways kaRhulumente, akukho kota yokufumana abantu abafumana izidanga zesidanga kunye nokufumana abafundi abaphumelele kwisikolo samabanga aphakamileyo.
I-2019 / 2 IGOSA LOKUFAKWA KWESICWANGCISO SOKUFUNDA
Abaviwa abahlangabezana neemfuno ngokubanzi kwi-KPSS 2019 / 2 isikhokelo bayacelwa ukuba bahlangabezane nazo zonke “iimfuno” kwicandelo lezicelo labasebenzi kunye nezikhundla kwesi sikhokelo. Nangona kunjalo, ukuba kukho intetho ethi "IZIPHUMO EZIQHELEKILEYO ZESICELO", abenzi-sicelo kufuneka benze iimfuno ezichazwe kweli candelo kwaye bazifunde ngononophelo phakathi kwezinye iimfuno ezifunwa amaziko.
Eli candelo kufuneka lifundwe ngononophelo njengoko iinkcazo malunga nabasebenzi ziya kwenziwa ngezantsi. Abaviwa abangazanelisiyo ezi mfuno abanako ukuqeshwa nokuba babekwe.
I-KPSS 2019 / 2 ISIKOLO ESIPHAKAMILEYO SEGOSA LOKUFUNDA
Ukuba ngummi waseTurkey. (Ngokungqinelana neNqaku 5901 lomThetho woBumi baseTurkey onguNombolo we-28, abagqatswa abaneKhadi eliBlue kwaye babhaliswe kubaphathi beKhadi leBlue abanakho ukufaka kwizikhundla nakwizikhundla kwesi sikhokelo.)
Ukugqiba iminyaka ye-18. .
Ukungakhatywa amalungelo oluntu.
Ukuba nophando lokhuselo kunye / okanye uphando kwindawo yogcino.
Kubagqatswa abaza kukhetha "iakhadi alan kwisikhokelo;
Nokuba amaxesha achaziweyo kwiNqaku 53 yeKhowudi yePenali ePennyini adlulile; Izenzo zolwaphulo-mthetho ngokuchasene nokhuselo lwaseburhulumenteni, nokuba ugwetywe unyaka okanye ngaphezulu ngesigqitho sangabom okanye uloyiso, ukona ngokuchasene nomgaqo-siseko kunye nokusebenza kwawo, ukunyanzela ubuqhetseba, ubuqhetseba, ubusela, ubuqhetseba, ubuqhetseba ukungabanjelwa ityala lokungabinamali, ukuphatha kakubi ithenda, ubugwenxa ekusebenzeni kwesenzo, ukuphanga imali okanye ukuthutha.
Kubagqatswa abaza kukhetha "isikhundla alan kwiZikhokelo;
Ngaphandle kwetyala lokungakhathali, nokuba bathe bangenelwa entolongweni kakhulu okanye ngaphezulu kweenyanga ze6 zokuvalelwa ejele okanye ukuxolelwa, iziphoso ezenziwe kumntu kaRhulumente zinokuba kukuzinyanzela, ungquzulwano, urhwaphilizo, ubuqhetseba, ubusela, ubuqhetseba, ubugqwetha, ukholo, ukungabinatyala okanye imbeko. ukugwetyelwa izityholo zolwaphulo-mthetho lobugqwetha okanye ukuthubeleza, ukuxhaphaza ubugqwetha, iithenda ezisemthethweni nezorhwebo, ngaphandle kokubhengeza iimfihlo zikarhulumente.
Ukufezekisa imfuneko yenkonzo yasemkhosini ekhankanywe kumhlathi 657 we-Article 48 ye-Civil Serviceants of Law Nomb. 6. (Abaviwa abasemkhosini nabo banokwenza ukhetho. Nangona kunjalo, abaviwa abengekhoyo okanye abekho ekuvoteni akufuneki benze ukhetho.)
Ukungakhubazeki ngenxa yokugula ngengqondo okanye ukukhubazeka emzimbeni kunokubathintela ekwenzeni imisebenzi yabo. (Yeyiphi imisebenzi eza kwenziwa, okwa kukhubazeka emzimbeni okanye ukugula ngengqondo kuya kuthathwa isigqibo ngamaziko afanelekileyo ngokujonga kwakhona iingxelo ezifunyenwe kwiibhodi zezempilo ezisemthethweni.)
Akukho kugula kwengqondo okunokumthintela ekwenzeni umsebenzi wakhe ngokuqhubekayo. (Yeyiphi imisebenzi eya kwenziwa ngokuqhubekayo, okuya kuthintelwa kukugula ngengqondo kuya kugqitywa ngamaziko afanelekileyo ngokujonga kwakhona iingxelo ezifunyenwe kwiibhodi zezempilo ezisemthethweni.)
-Imeko yokuphatha ezinye iimfuno zesicelo esifunwayo kwizikhundla ezikhethiweyo okanye izikhundla ziyafunwa.
I-TCDD Taşımacılık AŞ Uluhlu lokuqeshwa kwabasebenzi beSikolo samaBanga aphakamileyo
I-TCDD Tasimacilik AS izidanga zamabanga aphakamileyo zaba basebenzi zilandelayo, inani labasebenzi be-18 liya kwenziwa.
Ukulungiselela iiSuphu zeSikolo samaBanga aphakamileyo nqakraza apha
I-TCDD Taşımacılık AŞ Uluhlu lokuQeshwa kwabaSebenzi
I-TCDD Tasimacilik AS iya kuqesha abasebenzi be-52 abaye bafumana isidanga sokuqala kwezi zikhundla zilandelayo.
JIKELELE KUBALAWULI BAMAZIKO EMITHETHO KWEZITHUTHO INCWADI. abammeli 1
JIKELELE KUBALAWULI BAMAZIKO EMITHETHO KWEZITHUTHO INCWADI. GOSA 1
JIKELELE KUBALAWULI BAMAZIKO EMITHETHO KWEZITHUTHO INCWADI. GOSA 2
JIKELELE KUBALAWULI BAMAZIKO EMITHETHO KWEZITHUTHO INCWADI. I noToliko 2
JIKELELE KUBALAWULI BAMAZIKO EMITHETHO KWEZITHUTHO INCWADI. I noToliko 1
Ilayisensi yokuHamba nqakraza apha
Uluhlu lweTCDD Taşımacılık AŞ Uluhlu oluMfutshane lwabaSebenzi boMjikelo oMfutshane
I-TCDD yeThutho yoThutho kunye ne-DI degree degree edibene naba basebenzi balandelayo, itotali yabasebenzi be-62 iya kuqeshwa kwakhona.
JIKELELE KUBALAWULI BAMAZIKO EMITHETHO KWEZITHUTHO INCWADI. umqhubi 3
JIKELELE KUBALAWULI BAMAZIKO EMITHETHO KWEZITHUTHO INCWADI. KONDOKT is 2
JIKELELE KUBALAWULI BAMAZIKO EMITHETHO KWEZITHUTHO INCWADI. umqhubi 2
JIKELELE KUBALAWULI BAMAZIKO EMITHETHO KWEZITHUTHO INCWADI. KONDOKT is 1
JIKELELE KUBALAWULI BAMAZIKO EMITHETHO KWEZITHUTHO INCWADI. KONDOKT is 7
JIKELELE KUBALAWULI BAMAZIKO EMITHETHO KWEZITHUTHO INCWADI. KONDOKT is 4
JIKELELE KUBALAWULI BAMAZIKO EMITHETHO KWEZITHUTHO INCWADI. GOSA 10
Nxulumana iDegree nqakraza apha
(Source: imenyu yam)
I-TCDD yezothutho I-170 Igosa likarhulumente likaRhulumente liya kuthenga!
Imemori yokuThutha iMemur-Sen kunye neTCDD yezoThutho Inc.
Igosa lezothutho-Sen, iTCDD yezoThutho Inc. Inkonzo ...
Ukuhalalisela ukuThutha i-TCDD kwiGosa-Sen
Isibhengezo seGosa lezoThutho le-TCDD! I-KPSS 2019 / 1
UMphathiswa Arslan Iindaba Ezilungileyo! I-TCDD i-700 Igosa liya kuthenga!
I-TCDD okungenani iSikolo samaBanga aPhakamileyo i-363 iGosa eliQeqeshwayo lwabasebenzi…
I-TCDD Transportation Inc. ukuThengisa Abasebenzi abakhubazekileyo bakarhulumente
I-TCDD yezothutho i-25 iya kuqeshisa abasebenzi
I-TCDD yezoThutho Co Ukugaywa kwabasebenzi kwi-İŞKUR…
I-TCDD yokuThuthwa kwe-157 ukwenza abasebenzi abasigxina
Ukuqashwa kwabasebenzi bezothutho lweTCDD
IZiko leYedikuyular Ski, ikhephu lokuqala lonyaka
Umasipala wase-Istanbul umenyiwe kwintlanganiso ye-Istanbul